सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लाग्यो टुंगोः सातै दिनभित्र सबै प्रदेशमा सरकार – Halkaro
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । पहिलो पटक प्रदेशले प्रदेश सरकार पाउँदै छन् ।
अाइतबार सबै सात प्रदेशको टुंगो लागिसकेको छ । अाइतबार नै प्रदेश ५ र प्रदेश ३ मा सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलार्इ दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
अाइतबार नै प्रदेश ४ मा एमालेले संसदीय दलको नेतामा केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङलार्इ चयन गरेको छ । अब उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
सात मध्ये ६ प्रदेशमा बाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ । त्यस मध्ये चारमा एमाले र दुर्इमा माअोवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री हुँदै छन् ।
प्रदेश नम्वर २ मा चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले मुख्यमन्त्री पाउँदैछ । शुक्रवारसम्म एमालेका ३, माओवादीका दुई र मधेशवादी दलका एक नेता मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता चयन भैसकेका छन् ।
प्रदेश १ मा एमालेका राई
प्रदेश नम्बर २ मा भने संघीय समाजबादी फोरम, नेपालका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । फोरम र राजपा नेपाल मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । राउत पर्साका स्थानीय बासिन्दा तथा संघीय समाजवादी फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । उनी पर्साबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद छन् ।
राउत नेपालकै अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्यमन्त्री पदमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति हुनेछन् ।
प्रदेश नं २ मा फोरमको सबैभन्दा बढी २९ सिट रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ एमाले संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनी देशकै राजधानीको भूगोल समेत जोडिएको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ ।
शुक्रबार ललितपुरमा भएको निर्वाचनमा पौडेल ५८ मतमध्ये ३४ मत प्राप्त गरी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरिन् ।
प्रदेश नम्बर ३ प्रदेशसभाको सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनी मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (ख) बाट प्रदेशसभामा विजयी भएका थिए । हेटौडाका विकास योजनाकार पौडेल २०६४ र २०५४ सालमा हेटौडा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । ७० वर्षीय पौडेल ३७ वर्षयता राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
प्रदेश ४ गुरूङ
प्रदेश ४ को मूख्यमन्त्रीमा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ बन्ने पक्का भएको छ । अाइतबार गुरूङलार्इ नेता बनाउन सहमति जुटेको हो ।अन्तिम समयसम्म सहमति नभएपछि अायतबार चुनावको तयारी भएको थियो । तर काठमाडौँबाट महासचिवसहित पुगेको केन्द्रीय प्रतिनिधिको टोलीले पृथ्वीसुब्बालार्इ नेता बनाउन सहमति जुटाएको हो ।
यहाँ अर्का नेता किरण गुरूङले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै अाएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा एमालेबाट पार्टी प्रदेश ४ का संयोजक किरण गुरुङ र केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ खुलेरै लागेका थिए । किरण तनहुँ क्षेत्र नं. २ (ख) बाट र पृथ्वी लमजुङ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
किरण पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएर वनमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । पृथ्वी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा लम्जुङबाट विजयी भई पर्यटन मन्त्री भएका नेता हुन् ।
सबैभन्दा पहिलो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागेको प्रदेश हो प्रदेश ५ । प्रदेश ५ मा एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भैसकेको छ । एमालेले प्रदेश ५ बाट पोखरेललाई यसअघि नै संसदीय दलको नेता चयन गरिसेकको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको भोलिपल्ट पोखरेल सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । उनलाई गत निर्वाचनमै बाम गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा उभ्याएको थियो ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ को १ क बाट निर्वाचित भएका पोखरेल यो प्रदेशमा एक्ला मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए । अाइतबार नै गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखमा सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश ६ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । पार्टी प्रदेश नं ६ को संसदीय दलका नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही (कालीकोट) विहिवार चयन भएका थिए । संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । यहाँ जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारी पनि मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए ।
७ नम्बरमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि त्रिलोचन भटट्लाई अगाडि सारेका छ । उनी माओवादी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयन भैसकेका छन् । उनी डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशतर्फको अन्तिम नतिजा माघ ५ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गरेपछि मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदेशको मुख्य मन्त्री चुनीसकेपछि उसैको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन हुन्छ ।
← प्रदेश ४ को मूख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, किरण गुरूङ पछि हटे
तेस्रो इन्डो–नेपाल र चौथो मुवाँथाई राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु →